Nhau - Dzimwe nyaya dzinoda kutariswa nekomboni yemhando yekugeza maziso
Kune akawanda marudzi eanogeza maziso. Vagadziri vanosarudza iwo ekushambidza maziso akakodzera kune avo mafekitori zvinoenderana nemamiriro avo uye zvavanoda. Nekuda kwemhando dzakasiyana dzekushambidza maziso, dzimwe nzira dzekuchengetedza hadzina kufanana mukushandisa. Nhasi ticha taura zvinhu zvinoda kutariswa nekomboni yeziso washer.
Iyo yemubatanidzwa yeziso washer inoshongedzwa neyekutanga rubatsiro rwekushandisa yeiyo spray system uye yeziso yekuwacha system. Iyo yakaiswa yakanangana pasi kuti ishandiswe.
Kana makemikari akasaswa pane zvipfeko kana muviri wevashandi, iyo yekumwaya system yemubatanidzwa weziso washer inogona kushandiswa kugeza, uye nguva yekuwachisa ingangoita maminetsi gumi neshanu; Kana zvinhu zvinokuvadza zvikaiswa kumeso, kumeso, mutsipa kana ruoko rwevashandi, sisitimu yekuwachisa yeziso remubatanidzwa weziso washer inogona kushandiswa kufashaira, uye nguva yekutsvaira ingangoita maminetsi gumi nemashanu. Bohua compound eyewash inogadzirwa nemhando yepamusoro yezvinhu, izvo zvinongosangana nehutsanana zvinodiwa, asi zvakare zvine kugona kurwisa ngura.
Kupihwa kwezvinhu zvekuyamura zvechimbichimbi, kugadzirirwa kwezvirongwa zvekununura zvechimbi-chimbi uye zvibhorani zvechimbichimbi; Kunyangwe dhizaini yenzira yekukurumidzira ine musoro uye yakapfava; Iko kuferefeta, kudzivirira uye manejimendi enzvimbo dzengozi dzakakomberedza bhizinesi kana mukuita kwekushanda.
Kuchenjerera kunofanirawo kubhadharwa kune nyore kuisa. Kuvimbika panguva yekushandiswa, kwakadai sekushayikwa kwemvura, nezvimwe. Kushanda mukugadzirisa, kana zvikamu zvakakosha senge vharuvhu yebhora uye kuwacha kweziso kuchida kutsiviwa, zvinofanirwa kuve nyore kubvarura, kutsiva uye kuisazve, uye mutengo wekuchengetedza wakaderera . Yakasimba mushure mekutengesa sevhisi rehunyanzvi simba, inogona kugadzirisa matambudziko nenzira yakakodzera uye inoshanda.
Mushure mekusuma kwedu, ndinotenda iwe zvakare une imwe nzwisiso yekomboni yekugeza maziso, pamwe nezvimwe zvinhu zvinoda kutariswa kana uchishandisa. Kugamuchirwa kushanyira webhusaiti yedu, ndinotenda iwe uchashamisika